Akụkọ - otu esi etinye deeti achara
esi wụnye achara decking
A na-akpọkwa achara achara achara. Ejiri eriri bamboo dị elu ma mee ya ọtụtụ puku tọn teknụzụ nrụgide dị elu. Nhọrọ nke ụdị achara achara dị ọcha karịa nke ala achara. Ọ bụ ụdị ọhụụ achara nke mmadụ mere, na-ewere achara dị ka akụrụngwa ma na-edozi ya dịka usoro usoro n'ichepụta nke osisi recombined. Enwere profaịlụ ihu anọ nke REBO achara decking:
1. MF021 / DF021: ewepụghị elu imewe
2. MF121 / DF121: obere ebili mmiri mejupụtara imewe
3. MF321 / DF321: nnukwu ebili efegharị efegharị elu
4. MF621 / DF621: obere uzo elu imewe
Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ụdị ha masịrị ha.
Iji ka mma wụnye n'èzí achara, e nwere ụfọdụ ngwa ndị dị mkpa:
1. Joist: Ekwurudị ka isi tupu ịwụnye akwa ahụ. Osisi, igwe, achara, ihe nile di nma, ihe obula ichoro.
2. Obere vidiyo na kposara:igwe anaghị agba nchara. Maka decking clips, REBO na-atụ aro mkpirisi DC05 (onyonyo izizi), ọ ka sie ike ijide onwe ya, ọdịiche dị n’etiti bọọdụ abụọ ahụ bụ ihe dịka 6-7mm. Maka ihe nlele siding, inwere ike iji DC06 anyi (ihe onyonyo nke abuo) maka ile anya nke oma.
3. Electric Hụrụ
4. Nchara ígwè
5. Ọkwa Mmụọ
7. Electric ịghasa Driver
1. Tupu echichi, biko debe ngwaahịa na akọrọ na ebe ndò, zere anwụ na mmiri ozuzo.
2. Tupu echichi, hichaa workite, jide n'aka na isi ihe dị larịị ma kwụsie ike, drainage ahụ dị mma ma kwekọọ na ihe a chọrọ maka nhazi ụlọ.
3. A ga-edozi ndị na-arụ ọrụ ahụ na simenti ma ọ bụ taịl nile. Gbaa mbọ hụ na decking mkpọda 1-2 ogo si larịị iji wụsa mmiri.
4. Oghere dị n’agbata egwuregwu ahụ ga-adị n’agbata narị anọ na iri ise ruo ise. Site na oche nke 1860mm ogologo chọrọ min.5 joists.
5. Anya site na ala ruo na ala nke decking kwesịrị ịbụ 80-150mm.
Ndị a bụ Ntinye Guilds maka ntụnye:
1. Ndabere ntọala: ụzọ abụọ maka gị akwụkwọ
1) Opekempe: Cement-taịl nile n'okpuru ndị na-ekekọta ọnụ
2) Ọkachamara: Jiri okpukpu abụọ na-arụ ọrụ na ciment-taịl nile maka nkwụsi ike ogologo oge
2. Isi jikọtara: REBO achara decking na-iji ire na uzo isi mee ya, ya mere enwere ike ijikọ mbadamba abụọ ọnụ n'ụzọ dị mfe.
3. Instzọ Ntinye Siding: You nwere ike iji DC 06 maka ịmalite na ịkwụsị. mbadamba nwere ike jikọtara ọnụ dị mfe.
4. Decking na symmetrical grooves na abụọ ogologo n'akụkụ nwere ike ofu ọnụ na clip DC05 na joists. Anya n'etiti osisi ahụ bụ ihe dịka 6-7mm mgbe echichi ahụ.
N'ebe a ụfọdụ ndị ahịa ga-enwe mgbagwoju anya banyere ọdịiche dị n'etiti mbadamba abụọ. Gini mere enwere obere oghere di n'etiti ha? Dị ka anyị maara, maka decking n'èzí, a ga-enwe mgbasa na mbelata ọnụego n'okpuru anwụ na mmiri ozuzo, n'ihi ya, ọ dị mkpa ịhapụ obere oghere maka mbadamba iji daba ihu igwe dị iche iche.
Maka ozi ndị ọzọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ~